नेकपा विभाजन निर्णायक विन्दुमा, दुवै पक्षका केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि औपचारिकता ! – सुनाखरी न्युज
नेकपा विभाजन निर्णायक विन्दुमा, दुवै पक्षका केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि औपचारिकता !
Posted on: December 22, 2020 - 8:43 am
पार्टी विभाजनका लागि नेकपाका दुवै समूह अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । यसका लागि मंगलबार दुवै पक्षले केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेका छन् । ओली समूहले मंगलबार बिहान ९ बजे बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेको छ । बैठकमा दुवै पक्षले केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर संकलन पनि गर्नेछन् ।
ओली समूहबाट पार्टी कार्यालय सचिव ईश्‍वरी रिजालले ९ बजे वालुवाटारमा बैठक बस्ने सूचना दिएका छन् भने अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालसमूहबाट केन्द्रीय कार्यालयका अर्का सचिव श्रीराम ढकालले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बैठकको सूचना पठाएका छन् ।
दुवै पक्षले बैठकमा सहभागी हुन सबै केन्द्रीय सदस्यलाई सूचना पठाएका छन् । दुवै पक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एकअर्कामाथि कारबाहीको डन्डा चलाउन सक्ने सम्भावना छ ।
पार्टी विभाजन भए सूर्य चिन्हलाई लिएर विवाद हुने सम्भावना छ । नेकपा चुनाव चिन्ह सूर्य हुनेगरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ । केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत प्राप्त दललाई पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नेकपा विवाद यति सजिलै टुंगिने सम्भावना कम छ ।